Maalinta: Abriil 18, 2020
Diyaaraddii ugu horreysay ee loo soo diro Taliska Ciidamada Badda Turkiga ee ku sugan mashruuca Meltem 3 waa Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ayaa gaadhay xarumaheeda. Waxay heshiis la gashay Turkiga Alenia Aermacchi SpA bishii Luulyo 2012 [More ...]
Codsiga Hayat Eve Sığar waa la daabacay ..! Baro Khariiddadaada Halista ah ee Coronavirus
Wasaaradda Caafimaadka ayaa soo saartay arjiga Hayat Eve Sığar si ay ula socoto bukaanka ugana hortagto faafitaanka viruska. Waxaa ku dhawaaqay wasiirka caafimaadka Fahrettin Koca in dalabka Hayat Eve Sığar la horumariyay. Nolosha ku habboon guriga [More ...]
Diyaaradda Tareenka ee Xamuulka qaada ee alaabada dhoofinta alaabada laga soo dhoofiyo dalkeenna waxay u horseedday waddamada ay walaalaha yihiin
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu wuxuu cadeeyay in ganacsiga shisheeye ee dalal badan lagu carqaladeeyay iyada oo la eegayo cabirka jiilka cusub ee corona (Covid-19). Turkey ka qaadaynin taxadar kasta, aadanaha sida tareenka contactless [More ...]
Daawada Alert ee Istanbul Tekirdag Tareenka ka TCDD !; The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) General Directorate of April 20, 2020 Halkalı Wadada tareenka ee u dhaxaysa (Istanbul) -Muratlı (Tekirdağ), oo xadka urta xakameynta, muddo toban maalmood ah [More ...]
Gargaarka Gaadiidka ee Xirfadlayaasha Caafimaadka ee Eskişehir
Iyada oo lagu taageerayo shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee halganka safka hore ku jira inta lagu gudajiray nidaamka faafitaanka cududda 'Covid-19' oo leh dhaqammo iyo qalab caafimaad oo ay hirgaliyeen, degmada Eskişehir Metropolitan degmada ayaa sidoo kale gaadiid u ah geeya xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka hoteelada iyo hoyga martida. [More ...]
16 Milyan oo Taageero Ganacsi Gaadiidka Dadweynaha ah oo laga keenay Kocaeli Metropolitan
Duqa Magaalada Kocaeli ee Assoc Ayaa sameeyay daraasado muhiim u ah ganacsatada si loo yareeyo waxyeelada cudurka Coronavirus (COVİD-19) ee ku dhaca nolosha dhaqaalaha iyo nolosha bulshada iyo maalmahan adag. Dr. Tahir Büyükakın, "karaa [More ...]
Nidaamka Kaamirada ee shaqeeya 7/24 ee Salda Lake Mashruuca Aaga ayaa la rakibi doonaa
Wasiirka Deegaanka iyo Magaalooyinka Murat Kurum, oo ku saabsan sawirada ay soo galeen mashiinada dhismaha goobta dhismaha ee Lake Salda ee warbaahinta bulshada, "Sawirada xunxun ee la wadaago dhab ahaan kama tarjumayaan mashruuceena si aan u difaacno harada harada Lake Salda." qowlka [More ...]
Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan, si uu uga ilaaliyo muwaadiniinta ka soo horjeedka qiimaha xad-dhaafka ah, qiimaha cadaalad darrada ah ee ay abuureen xilligan cusub isagoo ku ballaarinaya baaxadda muddada cusub. [More ...]
Wax ka badalida Xeerka Codsiga OIZ
Shuruucda Wax ka Baddalaadda Hindise Sharciyeedka Fulinta Meelmarinta Aasaasiga waxaa lagu soo daabacay Gazette Rasmiga ah lana dhaqan galay. Wax ka badalida qawaaniinta ayaa ujeedadeedu tahay in la baabi'iyo dhibaatooyinka la soo maray arjiga. Isbedelka qawaaniinta, ayaa loogu talagalay kaqaybgalega OSB ee isaga u gaar ah [More ...]
Nomad wuxuu ka dhacay Tunnikada loo yaqaan 'YHT Tunnel' ee hoos yimaada Dhismaha Bilecik
Natiijada burburkii ka soo dhacay tuneel ku taal khadka Tareenka Sare ee loo yaqaan 'Speed ​​Speed ​​Train (YHT)' ee Bilecik laakiin aan wali la isticmaalin, ayaa ilko 40 mitir ka hooseysa 80 mitir ah oo ilkeed ah oo dhacday. Bilecik iyo Bozüyük [More ...]
Peker: 'Waxsoosaarka waa in lagu joojiyaa TÜDEMSAŞ TÜLOMSAŞ iyo TÜVASAŞ'
Gaadiidka iyo Shaqaalaha Shaqaalaha Tareenka Madaxweynaha Abdullah Peker coronavirus iyo TÜDEMSAŞ TÜLOMSAŞ ayaa warsaxaafadeed ka soo saaray TÜVASAŞ. Peker wuxuu yiri wax soo saarka waa in lagu joojiyaa bayaankiisa. Sharaxa buuxa waa sida soo socota: Mid ayaa ugu dambeeya [More ...]
Waqtigeeee Toddobaadka Gaadiidka Dadweynaha ee Sabtida iyo Axadda ee Istanbul ..? Miyay shaqeysaa Metrobus, Bas, Marmaray, Ferry iyo Metro Work?
Waqtigee ayaa la qaadayaa gaadiidka dadweynaha inta u dhexeysa 18-19 Abriil, marka bandowga lagu soo rogay Istanbul? Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxaa la ogeysiiyay adeegyada la xiriira iskuxirka magaalooyinka iyo basaska. Badiyaa Istanbul [More ...]
UTİKAD Mashiinka Saadka iyo Qalabka Ilaalinta ee Shaqaalaha Saadka
Intii lagu gudajiray nidaamka faafidda cudurka COVID-19, wakiilo kaladuwan si loo ciribtiro dhammaan qataraha suurtagalka ah iyo in loo maareeyo habraaca hab xakameysan oo ay iska kaashanayaan hay'adaha dowliga ah iyo wakiillada waaxaha gaarka loo leeyahay marka la eego ilaalinta caafimaadka iyo kala dambeynta. [More ...]
Dowlada Hoose ee Trabzon waxay qaadi doontaa adeegyada basaska waqtiyo cayiman inta lagu jiro bandowga, kaas oo bilaabmi doona caawa oo socon doona 2 maalmood, si loo helo marin u helka shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo shaqaalaha ka dhaafaayo wareegtada. [More ...]
Maanta taariikhda: 18 April 1923 Samsun-Khamiis Arbaco
18 April 1923 Samsun-Galkacamba ayaa maanta bilaabmay